Somalia oo iyada oo adeegsanaysa TIKNOLOJIYAD casri ah xal u ”heshay” arrin dhibaato ku haysey (Dal ay ceebaysay) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Somalia oo iyada oo adeegsanaysa TIKNOLOJIYAD casri ah xal u ”heshay” arrin...
Somalia oo iyada oo adeegsanaysa TIKNOLOJIYAD casri ah xal u ”heshay” arrin dhibaato ku haysey (Dal ay ceebaysay)
(Muqdisho) 25 Juun 2020 – Wasaaradda Kalluumaysiga DF Somalia ayaa ogaatey raxan maraakiib ah oo si sharci darro ah uga jillaabanaya xeebaha Somalia, gaar ahaan qaybta u gaarka ah Somalia ee EEZ.
Wasaaradda ayaa sheegtay in qiyaastii 112 markab oo sita calanka Iiraan, kuna xirta ama kasoo baxa dalka Iiraan ay yihiin kuwa ugu badan ee sida sharci darrada ah uga kalluumaysta xeebaha Somalia.
Wasaaradda ayaa adeegsatey hannaanka qabta sawirrada fog ee AIS oo Satelite-ka ku xiran, kaasoo xitaa lagu ogaan karo magaca markabka iyo halka uu ka yimid ama diiwaankiisa guud, waxaana si gaar ah isha loogu hayey tan iyo bishii Abriil ee sanadkan.
DIGNIIN – Wasaaradda Kalluumaysiga iyo Khayraadka Badda ayaa sheegtay in u digeeyso doonyaha Iiraaniga ah ee ka jillaabta xeebaha maxalliga ah ee dalka, iyaga oo aan cidina la socon, shati iyo sharcina u goyn, waxaana ay DF ugu baaqday inay joojiyaan maadaama ay halis ku yihiin amaanka cunto, qorshayaasha horumarineed iyo madax bannaanida geyi ee Somalia.
Iiraan ayaa ka mid ah dalal fara badan oo u badan Aasiyaan oo si rigli ah uga kalluumaysta xeebaha Somalia amaba ku daadiya sun halis ah oo ay kasoo fogeeyeen dalalkooda.
Tillaabadan magacaabista iyo ceebaynta ah ee ay adeegsanayso DF Somalia iyo farsamadan cusub ayaa wax la’aan dhaanta, ha yeeshee, waxaa muhim ah inay Somalia hesho ciidan badeed xeebeheeda ilaaliya.
Previous articleDEG DEG: Madaxwaynaha oo iclaamiyey shirka DF & Maamul-goboleedyada (Goor & goobta)
Next articleDAAWO: Turkiga oo markii ugu horreeysey tijaabiyey gantaal DIYAARADEED ka dusaya shub aad u dhumuc wayn (Meelaha loogu tala galay)